သူမ၏အမည်မှာဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်ဖြစ်၍ကလေး၂ ယောက်မိခင် ဖြစ်သည်။သူမ၏ယောင်္ကျားဖြစ်သူ
တယောက်စဉ်းစားမရဖြစ်နေလေသည်။အမှန်မှာဇော်ဇော်တို့လင်မယား ၂ ယောက်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရန် ခေါ်သွားခြင်း
စောက်ဖုတ်ကြီးနှင့် ဆပ်ပြာမြှုပ်တို့တွယ်ကပ်နေသောနို့အုံကြီးနှစ်ခုကိုတချိန်တည်း တွေ့ရလေသည်။
ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်၏လက်မောင်းသားကြီးကိုစမ်းမိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဘာမပြောညာမပြောနှင့် လက်မောင်း နှစ်ဖက်
Øအို မောင်မျိုး ဘာလုပ် အင့်အင်း ဟင်း×
မောင်မျိုးမှာဖက်ထားရင်းမှကားစွင့်နေသောဖင်ကြီးနှစ်လုံးအားပွတ်ပေးလိုက်ရာ။ ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်၏ Øအင်း အင်း×
ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်ထံမှ Øအင်း× ဟူသောညည်းသံသဲ့သဲ့လေးသာကြားလိုက်ရသည်။မောင်မျိုးသည် နောက်သို့ဆုတ်
Øအင်း ဟင်း ဟင်း× ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်၏ အင်းသံတချက်သာကြားလိုက်ရသည်။
နေ၍လူးလွန့်လျက် နေလေတော့သည်။ သို့ဖြင့်အချက်သုံးလေးဆယ်ခန့်ဆောင့်၍ပေးလိုက်သောအခါ
Øခဏလေးနော်မမသွယ်၊က္မန်တော်လဲပြီးတော့မယ်× မောင်မျိုးကခပ်ပြင်းပြင်းလေးဆောင့်ပေး လိုက်ရာ၊ Øပြွတ်
မွေ့ယာပေါ်သို့လှဲချကာအိပ်လိုက်ပြီး၊မို့ဖေါင်း နေသောပါးပြင်အားနမ်းရှုံ့လိုက်သည်။ ပြီးမှဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်၏
Øအား အင်း အား အင့်×
Øအို အင့် ဟင်း မောင်မျိုးရယ် ဘာလုပ်မလို့လဲကွယ်×
ကြီးမှာအထဲမှသားအိမ်ဝနှင့်သွားပြီးထောက်မိလေသည်။ယခုလိုလေးဘက်ထောက် လျက်လိုးရသည်မှာ ၂ဦးစလုံးအဖို့
လေသည်၊ပြီးမှလက်နှစ်ဘက် ဖြင့်နို့ကြီးများအားပူး၍ဆုပ်ကိုင်ကာသူ၏လီးကြီးအား ထိုးထည့်လိုက်ပွတ်လိုက်လုပ်
ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်တယောက်သူ့ထက်၇နှစ်-၈နှစ် ခန့်ငယ်သောမောင်မျိုးကိုစွသွဲားသည်ကတော့အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
Øအို မောင်မျိုးရယ် သူများတွေမြင်သွားဦးမယ်×
အရည်များဖြင့်စိုရွှဲနေလေတော့သည်ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်သည် Øဟင်း× ကနဲသက်ပြင်းချလိုက်ပြီး
Øအား အမလေး အားလား အင့်အင်း ဟင်းဟင်း×
လီးကြီးမှာ စောက်ဖုတ်အတွင်းအဆုံးသို့ရောက်သွားတိုင်းသားအိမ်ဝနှင့်ဒုတ်ကနဲ ဒုတ်ကနဲထိနေလေသည်။
Øအေး အေး× ဟုခေါင်း0x150ှိတ်ရင်းဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်အခန်းတွင်းသို့လှည့်၍၀င်သွားလေရာ၊ ဇော်ဇော်သည်
သုရေချိုးတုန်းကသူသေသေချာချာ မှတ်မိပါသည်။သူကိုယ်တိုင်ငေးမောကြည့်ခဲ့ပါသေးသည်။ အခုစောစောက
Øလာဇော်ဇော် ဘီဒိုကိုဒီဘက်လှည့်မလို့ကွယ် မင်းအဲဒီဘက်ကိုင်၊မမသွယ်ဒီဘက်ကကိုင်ရွှေ့မယ်×
Øအား က္မတ် က္မတ်× ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်မှာပေါင်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဖိ၍ကုတင်ပေါ်သို့ထိုင်ရင်း ရှုံ့မဲ့သွားလေသည်။
Øအင်း ဟင့်× ညည်းသံကလေးထွက်လာသည်။
Øခဏပါမမသွယ်ရာ၊ တော်တော်ကြာမနာတော့ပါဘူး× ဟုပြောရင်းအောက်မှနေ၍အလိုက်သင့်ကလေး ကော့
Øမမသွယ် ကျနော်လည်းပြီးတော့မယ်၊ဆက်ပြီးတော့ဆောင့်လိုက်ပါ မမသွယ်ရယ်×
Posted by sexygirl at 6:28 PM3comments:
'အီး အီး မမ အား ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး အား
မမ မမ ' 'ဇင်မာ စိတ်ကိုသွင်းထား ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး ----- စကတ်ပါးပါးလေး---
မမလုပ်ပေးနေတယ်------- ဇင်မာလေး ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး အရမ်းကောင်းနေပြီ---- ' 'အား အား အီး
စကတ်ပါးပါးလေးနဲ. အား မမ မမ မမ အား ကောင်းတယ် ကောင်းတယ် စကတ်ပါးပါးလေးနဲ. စကတ်ပါးပါးလေးနဲ.
အီး အား မမ ပြီးတော့မယ် အား-------- ပြီးတော့မယ် ........ အား စကတ်ပါးပါးလေးနဲ.အီး ' 'ဇင်မာ ဇင်မာ
ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးနဲ.ဇင်မာကိုလုပ်ပေးနေတယ်--- ဇင်မာ ဇင်မာ အား အား ပြီးခါနီးပြီ ' 'အား မမ မမ
အား ဇင်မာ ထွက်တော့မယ်----- ထွက်----------------တော့---------------------မယ် အား--
အား မမ ပြီးတော့မယ် အား-------- ပြီးတော့မယ် ........ အား စကတ်ပါးပါးလေးနဲ.
စကတ်ပါးပါးလေးနဲ. ---စ -------ကတ်------- ပါး---------------ပါး----------လေး-------
------- အား--------------- ' ဇင်မာ --------------------ပြီး---------------- လိုက် -
---- ------ ---- တော့' ' အား စကတ်ပါးပါးလေးနဲ.
စကတ်ပါးပါးလေး စကတ်ပါးပါးလေး စကတ်ပါးပါးလေး စကတ်ပါးပါးလေး စကတ်ပါးပါးလေး အား-----------
စကတ်ပါးပါးလေး စကတ်ပါးပါးလေး စကတ်ပါးပါးလေး စကတ်ပါးပါးလေး--------------------
စကတ်ပါးပါးလေး စကတ်ပါးပါးလေး အား----------------------- ' ဇင်မာတကိုယ်လုံးတုန်တက်လာပြီး
စောက်ဖုတ်အတွင်းမှစောက်ရည်များပန်းထွက်လာကာ ကျေနပ်မှုအပြည့်ဖြင့် ပြီးဆုံးသွားပါတော့တယ်။ ' ဟီ ဟီ ဟီ
ကောင်းလားဇင်မာလေး' ' အရမ်းကောင်းတယ်မမ ရယ်' ' ကဲဇင်မာ မမငယ်ကိုတလှည့်လုပ်ပေးဦးလေ'
'ကဲ ဇင်မာ နို.တွေကိုလက်နဲ.ဆုပ်ပေးစမ်း-- နာနာလေးညှစ်ပေး'
'အင်း---ဟုတ်ပြီ--- နို.အုံ.တွေကိုလက်နဲ.ဆုပ်ချေပေး----- အား ဟုတ်ပြီ'
ဇင်မာလည်း ငယ်ငယ်နို.တွေကိုလက်နဲ.ဆုပ်ချေရင်း နို.သီးခေါင်းလေးတွေကို လက်ညိုး လက်မနှင့် ပွတ်ချေပေးပါ
'အား ကောင်းလိုက်တာ -----နို.သီးခေါင်းလေးတွေတောင်လာပြီ'
'ဇင်မာ နို.စို.ပေးစမ်းပါ--- လုပ်ပါ---'
ငယ်ငယ်ကတဏှာသံပြင်းပြင်းနဲ.အတူ တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။ဇင်မာ ငယ်ငယ်ရဲ.နို.တွေကိုခပ်ပြင်းပြင်းစို.ပေးလိုက်
'အား ကောင်းလိုက်တာ အားရ ပါးရစို.စမ်းပါ နာနာလေးစို.ပေး--'
ဇင်မာ မမငယ်၏နို.တွေကိုစို.ပေးရင်းမှ လက်တဖက်ဖြင့်မမငယ် ခါးမှထမိန်ကိုဖြေလိုက်ပါသည်။မမငယ်ဖင်ကို0x143ကရင်း
'ဇင်မာ ငါ့စောက်ဖုတ်လေးကို ကိုင်လေ---'
'အင်း ဟုတ်ပြီ ပွတ် ပွတ်...အား ကောင်းလိုက်တာ'
ဇင်မာ လက်ကို မမငယ်အတွင်းခံစကတ်ပါးပါးထဲကိုသွင်းလိုက်ရင်းမမငယ်စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးကိုထိုးပွတ်ပေး
'အား ဇင်မာ ဇင်မာ အား အား'
'ဇင်မာ ငါ့စောက်ပတ်ကိုယက်စမ်း ------ယက်ပေးစမ်းပါ'
'ယက်ပါ ဇင်မာရယ် '
'အား ယက်ပေးပါ ----'
'ကဲ မမငယ်ပေါင်ကားပေး သမီးယက်ပေးမယ်'
ဇင်မာ မမငယ်ပေါင်ကြားထဲကိုခေါင်းဝင်လိုက်ရင်း မမငယ်စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးကိုလျှာနဲ.စတင်ယက်ပေးပါ
'အား ကောင်းလိုက်တာ ဇင်မာရယ်'
'အီး ကောင်းလိုက်တာ ကောင်းလိုက်တာ အီး ဇင်မာ ရယ် အား'
ဇင်မာ လည်းစေတနာပါပါဖြင့်ငယ်ငယ်စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းလေး နှင့်စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကိုအားရပါးရ
'အား ကောင်းလိုက်တာ ဇင်မာ ယက်------ယက်------- မရပ်နဲ.'
'အီး-----------အူး--------ရှီး----------ရှီး ကောင်းလိုက်တာ အား----------------မရပ်နဲ.---
'မြန်မြန်လေး ---------အား စောက်ပတ်ထဲမှာအရမ်းကောင်းလာပြီ------- မရပ်နဲ. မရပ်နဲ. အား----ဇင်မာ--
ပြီးတော့မယ်-----------အား အား ထွက်-----------------------တော့--------------------
-ထွက်ပြီ ထွက်ပြီ ထွက်ပြီ ထွက်ပြီ အား------------အား------------
'အင်း ကောင်းတာပေါ့ ဇင်မာရယ်—စောက်ဖုတ်အယက်ခံရတယ်ဆိုတာပြောမပြနိုင်လောက်အောင်ကောင်းတယ်'
အချိန်မှာ ညနေ၃း၃၀ ခန်.ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။
ပါးပါးလေး လှန်းထားတာကိုတွေ.လိုက်ရပါသည်။ဇင်မာဝင်းအိမ်နေရင်းဝတ်ဆင်သည့် ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး
လည်းအခါခါပင်။အိမ်သာထဲတွင် (သို.မဟုတ်) အိပ်ရာထဲတွင် ဤဲမြင်ကွင်းများကိုမြင်ယောင်ရင်း ကိုမျိုးအကြိမ်ကြိမ်ဂွင်း
တိုက်ခဲ့မိပါသည်။ယခုလည်း ကိုမျိုးသဘောကျသောဇင်မာ ရဲ. ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး ကိုတွေ.မြင်နေရရာ ကို
ကာရေစည်ပိုင်းဘောင်ပေါ်တွင်တင်လိုက်ပါတော့တယ်။ ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး နဲ.ကိုမျိုးလီးကိုပွတ်တိုက်လိုက်
'အား အား စကတ်ပါးပါးလေး'
အား အား-----အီး ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး နဲ. အား အား အား
အူး အူး အီး
ကိုမျိုး စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ စကတ်လေးကိုဝတ်ကြည့်ချင်စိတ်များထိန်းမရအောင်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
ကိုမျိုး ဇင်မာရဲ. ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး ကိုဝတ်ဆင်လိုက်မိပါပြီ။
စကတ်ပါးပါးလေးပေါ်က လီးကိုလက်နှင့်ဆုပ်ပြီး ကိုမျိုးမှန်မှန်ကြီးဂွင်းတိုက်နေပါတော့တယ်။
'အား အား ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး အား ဇင်မာဝင်း ဇင်မာဝင်း ဇင်မာဝင်း
'အီး ကောင်းလိုက်တာ ဇင်မာဝင်းရဲ.ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး ဇင်မာဝင်းရဲ.ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး
အား ငါ ၀တ်ထားတယ် ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးနဲ.ဂွင်းတိုက်နေတယ် အား အား အား
အား အား ဇင်မာဝင်းရဲ.ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး ဇင်မာဝင်းရဲ.ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး အား
အား အ အအ အ အ အ အ အ အအ အား ထွက်------တော့---------မယ်-------အ အ အ အ အအ
အား---------------------ထွက်----ပြီ ထွက်ပြီ အား-----------------------------အား-
Posted by gout kyaung at 1:20 AM2comments:
သူမနာမည်ကဇင်မာဝင်း။ အသက် ၁၉ နှစ်ခန်.၊ ဆယ်တန်းအောင် ပြီး တက္ကသိုလ် တက်ရန်စောင့်နေသူဖြစ်သည်။
ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က တောင့်တောင့် တင်းတင်း ရှိသည်။မို.မို.မောက်မောက် ရင်သားများနှင့် စွင့်ကားသောတင်
ကလည်း မြင်ရသူစွဲမက်ချင်စရာပင်။ ဇင်မာ မိဘ များကနယ်တွင်ရှိ ၍ ဇင်မာကရန်ကုန် တွင်အဒေါ်ဖြစ်သူနှင့်အတူ
နေထိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ တနေ.ဇင်မာ အိမ်တွင် တယောက်တည်းရှိနေ ရှန်သားရှပ်အကျီ ပါးပါးကလေးနှင့် ဒူးတ၀က်
လောက်ရှိသော ကျောင်းစိမ်း စကတ် ပါးပါး လှပ်လှပ်ကလေးကိုဝတ်ဆင်ထားပါသည်။ စကတ်ကလေးမှာ ခါးတွင်
သားရေကြိုးရှုန်.ကလေးနှင့် ကားကားလေးဖြစ်ကာ အဟောင်းကလေးဖြစ်၍ ပါးလှပ်လွန်းလှပါသည်။ဇင်မာအိမ်ရှေ.
ခန်းတွင်စာဖတ်နေရာမှ ညောင်းလာ၍ အိမ်နောက်ဖေးလှေကာရင်းသို.ထွက်လာရာစိတ်ဝင်စားဖွယ်မြင်ကွင်းတခုကို
တွေ.လိုက်ရပါသည်။ဇင်မာတို.အိမ် ဟိုဘက်ခန်းတွင်နေသော ကိုမျိုး၊ ဘောလုံးကန်ရာမှ ပြန်လာခြင်းဖြစ်ဟန်တူသည်။
စွတ်ကျယ်လက်ပြတ် နှင့် ဘောင်းဘီတို နှင့်။ခြေထောက် ဆေးနေရင်း နှင့်ညာလက်က ပေါင်ကြားကိုအုပ်ကိုင်ထားသည်။
ပေါင်ကြားက လီးနေရာကို လက်နှင့်အုပ်၍ ဆုပ်နယ်နေသည်။ထူးဆန်းသောမြင်ကွင်းကြောင့် ဇင်မာ စိတ်ဝင်စားမိသည်။
ကိုယ် ကို ရေစည်ပိုင်း နှင့်ကွယ်၍ ဆက်ကြည့်နေမိသည်။ ကိုမျိုးက ဘောင်းဘီခွကြားမှသူ.လီးကိုအပြင် ကိုအသာ
ထုတ်လိုက်၍ လက်နှင့်ပွတ်သတ်နေသည်ကိုဇင်မာတွေ.မြင်နေရပါသည်။ယောင်္ကျားလေးတယောက် ဂွင်းတိုက်၍ စိတ်
ဖြေနေတော့မည်.မြင်ကွင်းကိုတွေ.မြင်နေရ ရာဇင်မာစိတ်များလှုပ်ရှားလာလေသည်။ကိုမျိုးကဘောင်းဘီတို ဂွကြားမှလီး
ကိုထုတ်ကာလက်ဖြင့်ဆုပ်နယ်ရင်းစိတ်ဆွနေရာ ကိုမျိုးလီးကတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာခြင်းကို ဇင်မာမြင် တွေ.နေရပါ
သည်။ဇင်မာ စိတ်တွေလှုပ်ရှားကာ ရင်ထဲတွင်လည်း တလှပ်လှပ် ဖြစ်နေပါတော့သည်။ပါးလွှာသော စကတ်အဟောင်း
လေးအတွင်းမှ ဇင်မာ စောက်ဖုတ်ကလေးကလည်းတင်းမာဖောင်း0x143ကလာပါတော့သည်။ဇင်မာ ကာမဆန္ဒများထ0x143ကလာ
0x143ကနေပါတော့သည်။...အအအ ...အား.. ----အ ကိုမျိုးပါးစပ်မှအသံလေးတွေထွက်ရင်းလက်ကလည်းခတ်သွက်
လေးဝတ်တာကိုဘယ်တုန်းကကြည့်နေတယ်မသိဘူး၊ ကိုမျိုးကတော့ မမဇင်မာ..... စကတ်ပါးပါးလေးနဲ.စသည်ဖြင့်
အဆက်မပြတ်ရေရွတ်ရင်းမြန်မြန်ကြီးကိုဂွင်းတိုက်နေတယ် ၊ အ အ အအီး ပြီးတော့မယ် ၊အ အအ အ ပြီးတော့မယ်
မမ ဇင်မာ…. ပြီးတော့မယ် အ အီး အား အား.. စကတ်ပါးပါးလေးနဲ. စကတ်ပါးပါးလေးနဲ.အား..ပြီး..
တော့း....... အား စ .... ကတ်...ပါး.....ပါး...လေး... အား... ကိုမျိုးပါးစပ်မှရေရွတ်ရင်းအ
ဆက်မပြတ် ဂွင်းတိုက်နေမှုကိုဇင်မာ စိတ်ဝင်စားစွာကြည့်နေရင်း မှာ ပင် ကိုမျိုးလီးမှ သုတ်ရည်များပန်းထွက်လာသည်
ကို မြင်တွေ.လိုက်ရပါတော့သည်။အား.. အာ.. အား...ကိုမျိုးတဆတ်ဆတ်တုန်၍အရ သာအရမ်းရှိနေသည်ကို
ဇင်မာမြင်တွေ.ရပြီးနောက် ကိုမျိုးကလီးထိတ်တွင်ပေနေသော လရည်များကိုဘောင်းဘီတိုနှင့်သုတ်၍ လီးကိုဘောင်းဘီ
ကွင်းအားမျက်စိထဲမှမထွက်နိုင်အောင်ရှိနေပါတယ်။ဇင်မာ မှာအသက်လည်းငယ် ၊ သွေးသားကလည်းဆူဖြိုးသည့်အရွယ်
နေပါတော့တယ်။ဇင်မာ ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေးပေါ်မှ စောက်ဖုတ်ကလေး ကိုလက်ညိုးကလေးနှင့်ထိုးပွတ်နေ
နှုတ်ခမ်းသားများပွင့်လာပြီးစောက်စိကလေးကလည်းတင်းမာလာပါတယ်။အ....အား ကိုမျိုး အား ကောင်းလိုက်
တာ... အား အား ကိုမျိုးရယ် လက်တဖက်ဖြင့်ရှန်သား အက်ျီ ကြယ်သီးကလေးတွေကိုဖြုတ်နေပါတယ်။အား
အား... ကိုမျိုးရယ် ဇင်မာလုပ်နေပြီ ၊ အား ..လက်တဖက်ဖြင့်ဘရာဇီယာကလေးကိုအပေါ်သို.ဆွဲလှန်တင်ရင်း နို.
တွေကိုဆုပ်နယ်နေပါတယ်။ အား... ကိုမျိုးရယ် ကောင်းလိုက်တာ..... အ.. စကတ်လေးပေါ်ကလက်ခလယ်
လေးနှင့်စောက်စိကိုပါမကျန်ခပ်မြန်မြန် ကြီးပွတ်နေပါတော့တယ် ။ အား အား ဇင်မာအရမ်းကိုကောင်းလာတော့လက်
ကို ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေးထဲ ကိုထိုးသွင်းလိုက်ရင်း စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းကလေးကိုပါပွတ်သပ်နေတယ်။
ဇင်မာစောက်ဖုတ်ကထွက်နေတဲ့စောက်ရည်တွေကလည်း ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေးကို အကွက်ကလေးတွေဖြစ်
နေပါပြီ။အရဲစွန်.၍ဇင်မာလက်ခလယ်လေးကိုစောက်ဖုတ်ထဲထိုးသွင်းလိုက်တယ်။အ..အ.အ ၀င်သွားပြီ . .လက်ခ
လယ်လေးကဇင်မာစောက်ဖုတ်ထဲမှာဝင်လိုက်ထွက်လိုက် နှင့်လှုပ်ရှားနေပါတော့တယ်။ လက်ခလယ်ဖြင့်အသွင်းအထုတ်
ကောင်းလိုက်တာ------- အိုး---- ဇင် မာ .. ကောင်းနေ ပြီ အား-----
ဇင်မာအရမ်းကောင်းနေပါပြီ။ အိုး------- ကိုမျိုး ကိုမျိုး ကိုမျိုး ကိုမျိုး အား------------- ဇင်မာကောင်းနေပြီ
ဇင်မာကောင်းနေပြီ အား-------- ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေး ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေး အား----
ပြီးတော့မယ် - ---- --- -- ပြီးတော့မယ် အား --- စကတ်ပါးပါးလေးနဲ. ----
အား ------ ကိုမျိုး -----ဇင်မာပါးစပ်မှတတွတ်တွတ်ရွတ်ရင်း လက်ကလည်းစောက်ဖုတ်အတွင်းမှာ
ပါတော့တယ် ----- အား မမ ပြီးတော့မယ် အား-------- ပြီးတော့မယ် ........ အား စကတ်ပါးပါးလေးနဲ.
'ဇင်မာ ညီမလေး ဘာလုပ်နေတာလဲ'
မမငယ်ကဇင်မာ ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေး မှာပေနေသောစောက်ရည်အကွက်လေးများကိုကြည့်ရင်း
'ဒါမျိုးကဖြစ်တတ်ပါတယ်------ဟီ ဟီ ဟီ ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေး ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေး
နဲ.အော်ပြီး ဇင်မာလုပ်နေတာ ကိုမမမြင်ရတယ်'
'ဇင်မာ စကတ်လေးကပါးပါး လေးပဲကွာ' မမငယ်ကပြောပြာဆိုဆိုဇင်မာကုတင်ဘေးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ရင်းဇင်မာစကတ်
'ငြင်းမယ်တော့မကြံနဲ.နော်----လူကြီးတွေနဲ.တိုင်ပြောလိုက်မယ်—ဟီဟီ' 'မမ ဇင်မာတောင်းပန်ပါတယ်—မလုပ်ပါနဲ.'
'တိတ်တိတ်နေစမ်း ငြိမ်ငြိမ်ခံစမ်း' မမငယ်ကပြောပြောဆိုဆို ဇင်မာပေါင်ကြားမှစောက်ဖုတ်လေးကို
ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေး ပေါ်မှ လက်နဲ.မြန်မြန်ကြီးပွတ်နေပါတယ်။--- 'မလုပ်ပါနဲ.မမရယ်' ငယ်ငယ်
ကတော့ဂရုမစိုက်ပါ။ ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေး ပေါ်မှဇင်မာစောက်ပတ်လေးကိုသာလက်နှင့်ခပ်မြန်မြန်လေး
ပွတ်ပေးနေပါသည်။ 'ဇင်မာ စိတ်သွင်းထားစမ်း--နင့်ကိုလုပ်ပေးနေပြီ' ငယ်ငယ်ကဇင်မာစကတ်လေးကိုဆွဲလှန်၍ဇင်မာ
စောက်ဖုတ်ကိုလက်နှင့်ပွတ်သပ်ပေးနေပါသည်။ ငယ်ငယ် လက်ကဇင်မာနို.တွေကိုလည်းအားရပါးရဆုပ်နယ်နေပါတယ်။
' ဇင်မာ စိတ်သွင်းထားစမ်း-- ငါလုပ်တာကောင်းတယ်မလား' ငယ်ငယ်
ထည့်လိုက်ပါတယ်။နောက်လက်တဖက်ဖြင့် စောက်စိလေးကိုပွတ်နေလိုက်ပါတယ်။ 'အား--- --အား------ '
များပြင်းထန်လာပါတယ်။' ဟီဟီ စိတ်ကိုတင်းထားစမ်း' 'နင့်ကိုလုပ်ပေးနေပြီ' ဇင်မာလည်းမိမိလက်ဖြင့်လုပ်ခြင်းထက်အ
ဇင်မာစောက်ပတ်ထဲတွင်ဘေးတိုက်ရမ်းခါလှုပ်ရှားလိုက် အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးလိုက် စောက်ပတ်ထဲကိုလက်ညိုးတဆုံး
သွင်း၍ကပ်ညှောင့်လိုက် နှင့် ဇင်မာကိုအစွမ်းကုန်ပညာပြနေပါတယ်။ဇင်မာဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါး
ကလေးကလည်း ဇင်မာခါးပေါ်မှာလန်တက်နေပါတယ်။ မငယ်ကဇင်မာ ကိုလုပ်ပေးနေရင်းက 'ကဲ ဇင်မာလေးဘက်
ထောက်လိုက်စမ်း' 'ဟုတ်ပြီ----မျက်နှာကိုခေါင်းအုံးမှာအပ်ထား---- ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ထားလိုက်စမ်း' 'လုပ်လေ
မြန်မြန်လုပ်စမ်း' 'ဟုတ်------ဟုတ်ကဲ့ရှင့်' ဇင်မာမမငယ်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။' ပေါင်ကိုနည်းနည်း
ကားလိုက်---ဟုတ်ပြီ-- ကဲ စကတ်လေးကိုလှန်ပါ မမလေးရှင့်--- ကျွန်မရှင့်ကိုပြီးအောင်လုပ်ပေးပါတော့မယ်—ဟီဟီ'
ထို.နောက်မမငယ်က ဇင်မာစောက်ဖုတ်လေးထဲကို လက်ညိုးနှင့်လက်ခလယ် ကိုထိုးသွင်းလိုက်ရင်းခပ်သွက်သွက်လုပ်
ပေးပါတော့တယ်။' အီး----အား မမငယ်----အ ' လက်ညိုးနှင့်လက်ခလယ် နှစ်ခုပူးနှင့် ငယ်ငယ် က ဇင်မာကို
တယ်။ ဇင်မာဖင်ကြီးတွေကိုလည်းလက်နှင့်ဆုပ်နယ်ပေးနေတယ်။' ဇင်မာ စိတ်သွင်းထားစမ်း-- အော်စမ်း ကျောင်းစိမ်း
စကတ်ပါးပါးလေး လို.' ဟဲ့ ----အော်လေ--ကောင်မ' 'အီး--အီး ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး--
ပါးပါးလေး---အား' 'ဟုတ်ပြီ- ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးနဲ.ဇင်မာကိုလုပ်ပေးနေတယ်--- အရမ်းကောင်းနေပြီ'
Posted by gout kyaung at 1:14 AM 8 comments:
Posted by gout kyaung at 1:11 AM4comments:
“မခေါ်ပါနဲ့ဟာ။နေပလေ့စေ။” “အော်။ ဒါဖြင့်အကိုလဘက်ရည်သောက်မလား။ကျမသွားဖျော်လိုက်မယ်လေ”
“အေး ကောင်းသားဘဲ” ဆို၍သူ၏၀တ်ထားသောတိုက်ပုံချွတ်၍ “ရော့ သန်းရွှေ။အကိုအကôျအ
“ဘာမှမလုပ်ပါဘူး ညီမကိုအကို ချစ်မလို့ပါ။”
“ဟင့်အင်း အကိုကျမကြောက်တယ်ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ အကို”
“ဟင့် အင်း အကို ဟင့်အင်း ညီမကြောက်တယ်”
“အေးပါ ညီမရယ်။အကိုညီမကိုသနားလို့ချစ်လို့ယခုလိုကြံတာပါ” ဟုဆိုကာမသန်းရွှေရဲ့ပေါင်
“ညီမရယ် အကိုရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျှောပါလားဟင်” ဟုဆိုကာမသန်းရွှေ၏လက်တဖက်ကိုဆွဲ၍သူ
မသန်းရွှေမှာဓါတ်လိုက်သကဲ့သို့တွန့်လိမ်တက်သွားပြီး “အောင်မလေး။အလေး အမေ အား” ဟု
ထိုးသွင်းလိုက်ရာ။ဗျစ် ဗျစ် ဗျစ် ဖွတ်နှင့်အတူ။
“အောင်မလေး အကို ကျွတ်ကျွတ် နာတယ်အကို နာတယ်။အိ အမေ ရှီး၊” ဟုဆိုကာ
“အဟင့် အဟင့် အို ရှီး ကျွတ်ကျွတ် တော်ဘီအားတော်တော့အကို။ကျမအဖုတ်ကွဲသွားပြီ။
အားစပ်ပြီးနာလိုက်တာအကိုရယ်၊အား ရှီး ကျွတ် ကျွတ် “
“တော်ပါတော့အကိုရယ်။ကျွတ် ကျွတ် နာတယ်။ ကျမစောက်ပတ်အမှေးကွဲသွးပြီထင်တယ်၊
စပ်ဖြင်းဖြင်းဖြစ်နေတယ်။ မနက်ဖန်တနင်္ဂနွေနေ့မဟုတ်လား အကို မနက်ဖန်မှအကိုသဘောလုပ်ပါ နော်”
“ဟဲ့ သန်းရွှေ အခန်းထဲညီး။ဘာဝင်လုပ်တာလဲ။ဟာအပြင်ကတံခါးလဲပိတ်မထားဘူး”
တုန်တုန်ရီရီဖြင့် “ဘာ ဘာ မှမလုပ်ပါဘူး အကိုပြန်လာလို့ကော်ဖီဖျော်ပြီးသွားပို့တာပါ”
“အော် ကိုဇော်ရောက်နေပြီးလား” ဆိုကာသင်းသင်းအခန်းထဲဝင်သွားသောအခါ။ကုတင်ပေါ်တ
“ဟင် ကိုဇော်ဘာဖြစ်လို့အိပ်နေတာလဲ။ နေမကောင်းဘူးလား ဟင်”
“အို အို ကိုဇော်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအခုနကောင်မလေးနဲ့စခမ်းသွားနေတယ်ထင်တယ်”
“ဟာ သင်းကလဲကွာမဟုတ်တာ။အကိုသောက်ဖို့ကော်ဖီလာပိုတာပါ” ဟုဖြေရင်းသင်းသင်းရဲ့
“အို ကိုဇော်နေအုံးဟို အခန်းတံခါးသွားပိတ်အုံးမယ်”
တုံး။ဖြုံးဆို ဟောဒီမယားချောရောက်လာတာပါဘဲ။ ကဲကွာလာစမ်းပါ။” ဆို၍သင်းသင်းလက်
“ဟာ မဟုတ်ရပါဘူးသင်းအရမ်းမဲ့မစွတ်စွဲပါနဲ့” ဟုပြောရင်းသင်း၏ပေါင်းကြားထဲမှဖေါင်းပွပွ
“အို နေအုံး သင်းအ၀တ်အစားတွေချွတ်ပေးမယ်ကိုဇော်လဲအားလုံးချွတ်လိုက်နော်” ဟုဆိုကာ
“အိုး ဟိုး ဟိုး ရှီး အောင်မလေးဖြေးဖြေးကိုဇော် ဖြေး ဖြေး ကျွတ် ကျွတ်”
“နဲနဲလောက်လျှောစမ်းပါအုံးသင်း အခုလိုလုပ်ထားတော့ကိုဇော်လိုးအားမရှိဘူးပေါ့” ဆို၍
“အောင်မယ်လေး အိုး ရှီး ကျွတ်ကျွတ် အား။ကိုဇော်ခနလေးနားထားပါ အို ကျွတ်ကျွတ်
“အောင်မယ်လေး အမေ အို ရှီး ကျွတ် ကျွတ် ကိုဇော် အောင့်လိုက်တာခနလေးရပ်ပါ။ရှီး ကျွတ်
“ကိုဇော် အကုန်မနှုတ်နဲ့လေ။ချန်ထားအုံး သင်း အံကိုကြိတ်ပြီးအောင့်ခံပါ့မယ်။”
“အေးဒါမပေါ့သင်း ကိုဇော်ဖြေးဖြေးခံနိုင်ရုံလိုးပေးပါမယ်” ဆိုကာသွင်းလိုက်နှုတ်လိုက်တချက်
“အို ကျွတ် ကျွတ် အား ရှီး အမေ့ဖြေး ဖြေးဖြေးနော် ဟုတ်ပြီ ကိုဇော် ဖြေးဖြေး အား”
ထိုအခါကိုဇော်ဝင်သည်အချက်မှန်မှန်လိုးပေးနေရာ ဖွတ် ဗျစ် ဖတ် ဖတ်
“အလို လေးလေး ကိုဇော် ကောင်း ကောင်းလိုက်တာ အမလေး ကျွတ် ကျွတ် ရှီး အား။ ဟုတ်ပြီ
အရှိန်ရလာပြီးကိုဇော် လိုး လိုး” ဟု သင်းသင်းသည်ကုတင်ဘောင်ကိုတအားဆုတ်ကိုင်၍
ထိုအခါကိုဇော်ဝင်းသည်အချက်ပိုင်ပိုင်နှင့်မှန်မှန်လေးအချက်ပေါင်း၅၀-ခန့်လိုးပေးလိုက်ရာ။ ဖွတ် ဗျစ်
ဖတ်ဖတ် မလပ် စွပ် စွပ် မည်ကာသင်းသင်းလဲကော့ကာပြန်ကာလူးကာဖြင့်နှစ်ဦးသား
“ကိုဇော်ဒီနေ့ သင်းလေမမအေးတို့နဲ့အထူးဝိုင်းစီစဉ်ထားတယ်။ကိုဇော်လိုက်မယ်မဟုတ်လား ဟင်”
“ညီမ မနေကဘယ်လိုနေသလဲဟင်” ဟုဆိုကာကုတင်ပေါ်အလိုက်သင့်တင်၍ပါးနှစ်ဖက်ကို
“အေးဒီလိုဆို ဒီကနေ့မနာအောင်အကိုပြုပြင်ပြီးလိုးပေးပါမယ်။” ဆိုကာမသန်းရွှေ၏ထမီကို
“အို အကိုကလဲရှက်ပါတယ်ဆို။ အဟင့်”
တန်အရသာရှိတာညီမရဲ့။ ကဲညီမအကôျတွေအားလုံးချွတ်လိုက်ပါ။ မရှက်ပါနဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာညီမနဲ့
“အို အကိုလဲဘယ်လိုလုပ်တာလဲနာလိုက်တာ။ကျွတ် ကျွတ်”
“အမေလေး အကိုနာတယ် ကျွတ် ကျွတ် အဟင့် အို ယားလိုက်တာ” ဆို၍မသန်းရွှေသည်
“အကို လိုးပါတော့ ညီမခံနိုင်ပါပြီ”
“အို အကိုယားတယ် ယားတယ် လိုးပါတော့ညီမဘယ်လိုနေရမှန်းမသိတော့ဘူး”
စီးပိုင်နေအောင်သုတ်ပေးပြီး။မသန်းရွှေစောက်ပတ်ဝကိုတေ့၍ဒစ်Õမပ်ရုံထိုးသွင်းလိုက်ရာ ဗျစ် ဗျစ် ဗျ
“အောင်မယ်လေး အကိုရယ်နာလှချည်ရဲ့သေပါပြီအင်း ကျွတ် ကျွတ် အား အကိုခနလေး။ အို ရှီး
ခနလေး နေပါဦး နော်” ဟုဆိုလေရာ။
“ကျွတ် ကျွတ် အကိုဆက်လိုးလို့ဖြစ်ပါမလား။ အားသိပ်နာတာဘဲ အား ရှီး ကျွတ် ကျွတ်”
“ဖြစ်ပါတယ်ညီမရဲ့အစမို့ပါ။တော်ကြာအရှိန်ရလာလို့သွေးပူလာရင်အင်မတန်ကောင်းလာမှာ” ဆို ၍နဲနဲ
ဖိသွင်းလိုက်ရာ ဗျစ် ဖွတ်
“အောင်မလေး အမေရေ။ အား ရှီး ကျွတ် ကျွတ် အကိုဖြေး ဖြေး လိုးနော်။ရပ်မထားနဲ့လေ လိုး
လိုး အမေ့ အိုး ရှီး ကျွတ် ကျွတ်”
“အမေလေး သေပါပြီ အို အကိုမရပ်နဲ့ ဆက်လိုး အားကောင်း ကောင်းလိုက်တာ ဟုတ်ပြီး အကို
လိုး လိုး အား ဟာ ကောင်းလိုက်တာ ဟင်း”
ဗျစ် ပလပ်စွပ် ဖွတ် ပလပ်စွပ် ဖတ်၊
“ဟုတ်ပြီ ဟုတ်ပြီ။လိုး လိုး အောင်မလေးကောင်း ကောင်းလိုက်တာအကိုရယ် ဟင်း။”
အသံနှင့်အတူနှစ်ဦးသား ဟောဟဲ ဖြစ်ကုန်ကြလေတော့သည်၊
“အောင်မလေး ရှင် ရှင် ကိုဇော်ဘာလာလုပ်တာလဲ ဟင်”
“အော် အေးကလဲဗျာ လာရင်းကတော့သင်းရှိတယ်ဆိုပြီးလာတာပါဘဲ။အခုတော့”
“အော် အေး သင်းသင်းဘယ်သွားသလဲဟင်”
အေးအေးသည် တဟင်းဟင်း ဖြစ်ကာတွန့်လိမ်ကောက်ကွေးကာ “ကဲ ကိုဇော်လိုးပါတော့ရှင်”
“လိုးပါမယ် အေးရယ် အေးရဲ့စောက်ဖုတ်လေးကညောင်ရွက်လေးနဲ့တူတော့ဘယ်ပုံစံလိုးရမယ်
“အော် တော်တော် ထီကာချဲ့တဲ့လူဘဲနော်၊ရှင့်သဘောရှင်ကြိုက်သလိုသာပြော။
“ကဲ အေး အဲဒီအနေအထားတိုင်းနေနော်၊ ကိုဇော်လိုးတော့မယ်”
ကိုဇော်ဝင်းသည်တေ့ထားသောလီးကြီးနှင့်ခါးဆွဲကာထိုးသွင်းလိုက်ရာ။ ဖွတ် ဗျစ် အသံနှင့်တ
“အမလေး ကျွတ်ကျွတ် အား ဟုတ်ပြီး အား ကောင်းအလို ရှီး ကောင်းလိုက်တာ ကိုဇော်ရယ်။
ပေးလိုက်ရာ။ ဖွတ် ဖတ် ဖတ် စွိစွပ်စွပ် ဖွတ် စွပ် ပလပ်စွပ်။အခေါင်းသံဆူညံပြီးနှစ်ဦးသားမှောက်
မအေးအေးက “ကိုဘတင်ရေ ကားကြုံတုန်းညဈေးတန်းလိုက်ချင်လို့ကျမပါလိုက်မယ်။”
“စီစီ ဒီမှာနေအုံးနော်။ မမအေးညဈေးတန်းသွားအုံးမယ်” ဆိုပြီး
“ဒီမှာအေး ကိုတို့ဒီမှာစခမ်းသွားကြရအောင်။ ဒါမှစီစီတို့လဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ချစ်ကြပါစေ။
စီစီသည် အခန်းတွင်းဝယ် ဘလာကျင်းပြီးလျှက်ဆားပုလင်းနဲ့စောက်ခေါင်းတွင်းသွင်း၍စခမ်း
“အောင်မယ်လေး မောင်ရယ် လန့်လိုက်တာ”
“မလန့်ပါနဲ့စီစီရယ် မောင်အချိန်မှီရောက်လာမှဘဲ။ ကဲ မောင်တို့ပျော်ပျော်ပါးပါးစခမ်းသွားရ အောင်”
“အိုး ဟိုး ဟိုး ဒီလိုလိုးလို့ဘယ်ကောင်းမလဲ။ ကျမစောက်ပတ်လေးသွေးပူသွားအောင်ရှင်ပြုစု
ပေးအုံးမှပေါ့။ နောက်မှ ဘယ်ပုံစံလိုးရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျမစီစဉ်ပေးမယ်၊”
ပေါင်းများစွာဖိလိုးပေးလိုက်ရာ။ ဖွတ် ဘွပ် ဖွတ်ဘွပ် ဟုလှိုဏ်ခေါင်းသံနှင့်အတူ
“အမလေး လေး အား ကောင်း ကောင်းလှချည့်ရဲ့ အား”
Posted by gout kyaung at 1:09 AM4comments: